Dhaxalka Tokyo 2020 wuxuu saameyn xoog leh ku yeelan karaa dalxiiska Japan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » Dhaxalka Tokyo 2020 wuxuu saameyn xoog leh ku yeelan karaa dalxiiska Japan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Jaban ee Japan • Wararka Raaxada • Shirka Warka Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Sports • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Waxyaabaha wanaagsan ee dhaxalka Tokyo 2020 ee dhaxalka dalxiis ma bixin doono wax dhaqso ah oo ku saabsan xaddiga maalgashiga ee lumaya sababtoo ah booqashada caalamiga ah iyo booqashada gudaha ee xaddidan.
Tokyo 2020 waxay Japan siisaa faa'iidooyin muddada-dheer.
Tokyo 2020 waxay qaranka ka caawin doontaa iyadoo abuureysa wax soo saar dalxiis oo aad u adag oo kaladuwan sanadaha soo socda.
Japan waxay noqon doontaa booska koowaad si ay uqabsato dalabaadka soo laabanaya ee gudaha iyo dibaddaba kadib Olambikada.
Qaar badan baa ogaan doona Tokyo 2020Dhaxalka dalxiisku inuu noqdo mid aad u xun, sababtoo ah wuxuu dhacayaa inta lagu jiro aafada iyo dhibaatooyinka soo raaca ee taas la yimid. Si kastaba ha noqotee, waxoogaa wanaagsan ayaa wali la soo jiidan karaa marka la fiirinayo mustaqbalka dalxiiska Japan.
Dhinacyada wanaagsan ee dhaxalka Tokyo 2020 ee dhaxalka dalxiis ma bixin doono wax dhaqso ah oo ku saabsan xaddiga maalgashiga ee lumaya booqashada caalamiga ah iyo booqashada gudaha ee xaddidan awgeed. Si kastaba ha noqotee, waxay faa'iidooyin u tahay Japan muddada-dheer, waxayna ku caawin doontaa qaranka iyada oo loo abuurayo wax soo saar dalxiis oo aad u adag oo kala duwan sanadaha soo socda.
Kaabayaasha cusub ee la xiriira dalxiiska ayaa kordhin doona wax soo saarka, awoodda, iyo soo jiidashada
Khadadka gaadiidka ee la hagaajiyay ee loogu talagalay Olombikada, sida Tokyo's Saldhigga Cusub ee Yamanote, wuxuu yareyn doonaa saxmadda dadka deggan Japan waxayna gacan ka geysan doontaa hagaajinta waxtarka socdaalka ganacsiga gudaha ee horay u socda, abuurista kororka awoodda wax soo saar ee dhaqaalaha Japan.
Intaa waxaa sii dheer, ballaarinta Terminalka 2 ee garoonka diyaaradaha ee Haneda waxaa qeyb ahaan loo sameeyay si loo abuuro awood sare u qaadista booqashada caalamiga ah ee ay abuuri laheyd Olimbikada. Terminal 2 wuxuu horey u ahaa kaliya guriga. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay qayb ka mid ah xarunteeda oo loo beddelay lana ballaadhiyey si ay ula qabsato irdaha caalamiga ah Sannadkii 2020, ANA waxay soo bandhigtay saddex qol oo casri ah maaddaama ay u guurisay inta badan howlaheeda caalamiga ah Terminal 2.
Tallaabadan ay ka qaaday shirkadda diyaaradaha ee ugu weyn Japan waxay muujineysaa sida ballaarintaan, oo markii ugu horreysay loogu talagalay Olombikada, ay ka faa'iideysan doonto dalxiiska gudaha soo gala sanadaha soo socda, iyadoo lagu kordhinayo awood ballaaran iyo qolallo cusub oo cusub, taas oo kordhin doonta kharashka dalxiiska iyo hagaajinta khibradaha dalxiis.
Heerarka booqashada guryaha ee ka hor Japan ka hor ayaa la saadaalinayaa inay sii jiri doonaan sanadka 2022, ka dib kobaca ayaa la filayaa inuu ku kordho Isu-darka Tirada sanadlaha ah ee isku-darka (CAGR) ee 6.3% laga bilaabo 2021-ka illaa 2024. Booqashada inbound waxaa la filayaa inay gaarto heerarka safka hore 2024, taas oo si weyn uga dambaysa dalxiiska gudaha. Si kastaba ha noqotee, dadka soo galaya waxay u badan tahay inay koraan wixii ka dambeeya 2024 iyo soo jiidashada soojiidashada oo hagaagtay, oo ay weheliso awood, ayaa lagama maarmaan noqon doonta si loo fududeeyo kobaca mustaqbalka ee suuqyada caalamiga ah. Iyadoo horumarintaan horeyba loogu dhameystiray ciyaaraha Olimbikada, Japan waxay noqon doontaa booska koowaad si ay uqabato soo laabashada wadankeeda, laakiin waxaa ka sii muhiimsan, dalab caalami ah kadib Olambikada la qabtay.
Horumarinta tas-hiilaado isboorti oo heer caalami ah dhacdooyinka mustaqbalka
Japan hadda waxay leedahay goobo isboorti oo casri ah oo heer caalami ah oo loogu talagalay in lagu qabto dhacdooyinka isboorti ee mustaqbalka, taas oo macnaheedu yahay in khasaarihii Olombigga la badbaadin karo mustaqbalka. Markii loo tartamayo dhacdooyinka mustaqbalka, kiiska Japan hadda waxaa lagu xoojin doonaa xarumahan cusub. Dalabyadaasi waxay noqon karaan qaab dhacdooyin kale oo caan ah oo badan oo isboorti ah, ama qaab dhacdooyin isboorti oo keliya. Iyadoo aan loo eegin nooca munaasabadda isboorti, Japan hadda waxay isu diyaarin kartaa inay noqoto marin weyn oo loogu talagalay dalxiiska dhacdooyinka isboortiga iyo dalxiiska kaqeybgalka cayaaraha.